Dhageysiga Koowaad wuxuu ka Bilaabmayaa Ankara YHT Shilka Shilka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraAnkara YHT Shilka Shilka wuxuu Bilaabey Maxkamad Koowaad
tijaabada shilka ankara yht ayaa bilaabatay tijaabada koowaad
Maxkamadeyntii ugu horreysay ee shil tareen xawaare sare ka dhacay Ankara bishii Diseembar 2018, oo ay ku dhinteen sagaal qof in ka badan 80 qofna ay ku dhaawacmeen, ayaa ka bilaabmay maxkamadda Ankara Courthouse. Wadarta 10 ka tirsan shaqaalaha TCDD, oo seddex ka mid ah la hayo, ayaa maxkamad la saaraa.
Wargeyska WargeyskaMarka loo eego warbixintii Serkan Alan, “Dhageysiga ugu horreeya ee kiiska 13 eedeysane oo la xiriira shilka tareenka xawaare sare ku dilay ee sagaal qof ka dhacay Ankara 2018-kii Diseembar, 10 wuxuu ka billowday Ankara 30-ka Maxkamadda Sare ee Dambiyada.
Tareenka Xawaaraha Sare (YHT), oo socodsiiya inta udhaxeysa Ankara iyo Konya, iyo sagaal tababarayaal ah ayaa lagu dilay daraasiin darawalna way ku dhaawacmeen shil ka dhacay isku dhacyada tareenka hagaya si loo xakameeyo biraha. 15 eedeysane ayaa ka qeybgalay dhageysiga, sedex ka mid ah waa la xiray halka toddobo ka mid ah la xiray iyada oo lagu eedeeyay 'in ay sababeen in kabadan hal dhimasho iyo dhaawac'.
Waan ka xumahay inaan noqdo silsiladdii ugu dambaysay silsiladda '
Eedaysanaha sameeyay difaaca ugu horreeyay eedaynta ayaa ah Cusmaan Yildirim, sarkaal ka tirsan tareenka oo la sheegay inuu sababay shilka maxaa yeelay wuxuu ilaaway inuu beddelo maqaskii u oggolaaday in tareenadu galaan tareenka kala duwan marka loo eego jihada ay u baxayaan. Yildirim, oo u rajeeyay tacsiyadeyn kuwa naftooda ku waayey, ayaa yiri, özür waxaan ka codsanayaa qof walba inuu yahay isku xirka ugu dambeeya silsilado badan oo sababay shilkan.
Nidaamka kuleylka ah kama shaqeyn SHARAR '
Yildirim oo sharraxaya maalinta shilku dhacay, maqaska M74 ma shaqeynin weligiisna lama tusin, ayuu yidhi. Yıldırım wuxuu yidhi, için Sababtoo ah shaqaaluhu waxay shaqeynayeen saacadaha dheeraadka ah, kama aysan shaqeynin inay ka fogaadaan waqtiga dheeraadka. Ma ogeyn inaan ahaa qofka keliya. Markay ahayd 4-5-tii subaxnimo, Eryaman wuxuu kaheley digniino ku saabsan maqaska. Waxaan isku dayay inaan dhiso jidka 12-aad ee amarka sarkaalka howlgalka. Baraf-xiiran ayaa barafoobay. Caadi ahaan nidaam kuleylka ayaa ku jira maqaska laakiin ma shaqeynin. Waxa dhib igu noqotay samaynta maqas. Sarkaalku wuxuu sheegay inuu jiray tareen 13-kii. Waan la macaamilay waanan sameeyay. Markan waxaan u aaday inaan sameeyo maqashii 11-aad oo gambis soo dhacay. Gacmahayga iyo cagahaygu barafoobay. Waxaan qabow ahaa ilaa 4-5. Malaha maan qufulin. Waxay ahayd qabow. Waxaan sameeyay 11-ka maqas. Sameynta maqaska qaladka ayaa ah dhacdo caan ku ah wadada tareenka. Ma aysan ka taxadirin arrintan. Tareenka wuxuu iga gudbay hortayda laakiin suurta gal ma ahan inaan arko taas xitaa. Kadib shilkii ayaa dhacay aniga oo naxdin galay. Wali waan argagaxsanahay. ”
Su'aalaha 'maqas-hayaha maxkamadda' ma weydiiyay, eedeysane Hillaac, "Waxaan u maleynayay inaanan sameynin," ayuu yidhi.
'Shaqadayda waa mid sababa cilad'
Qareenka eedeysanaha Mükerrem Aydoğdu wuxuu u sheegay eedeysanaha Yıldır :m: “Miyaanuu helin tababar kahor? Miyuu ku sameeyay maqas maqashiin la'aan tababar? Miyuu sidan u sameeyay isagoo aan garaneyn shaqadiisa? Yıldırım waxaan markii ugu horreeyay u adeegsaday 9-ka Diseembar (2018). Haddii kale garan maayo sida loo isticmaalo golaha. Guddigan waa mid elektiroonig ah. Waan ogaa inay xiinnada ka buuxaan. Wuxuu lahaa calaamado oo meel fog ayuu fiiriyey. Ma jiro wax calaamad ah maqas-galka elektiroonigga ah. Waxay u badan tahay inaanan khaladaad ku sameyn doonin elektaroniga. Shaqadayda kaliya ayaa khalad ahayd markii hawadu qabowday Di
Cusmaan Eker, oo ah qareenka Cusmaan Yildirim ayaa yidhi, imin Macmiilkaygu ma haysto meel uu ku noolaado muddo dheer. Maqas maqashuhu maahan wax fudud. Laga soo bilaabo nadiifinta maqaska ilaa fududaanta xiirashada, shaqooyin badan ayaa la qabtaa. Waxaa jira shan tababar oo dheeri ah oo macmiilku qaadan doono. Macmiilku wuxuu kujiray waajib kahor intuusan helin. Maxaysan u helin waxbarasho?
'SAXIIXA LAGU SOO SAARAY SHIRKA'
Qareen Eker wuxuu yiri, "Ma waxaa jirtay aaladda looga saarayo barafka loo isticmaalo nadiifinta scissor? Waxaa jiray calaamadaha calaamadaha, "eedeeyaha hillaaca," ma uusan jawaabin oo wuxuu yiri waxaa jira cilado farsamo.
Garyaqaanka dhibbanaha Melih Koluaçık wuxuu yiri, "Ma waxaa dhici lahaa shil haddii uu jiro nidaam kontarool oo lagu beddelayo maqasyada? Ma jiraan wax calaamad ah? In kasta oo shilka looga hortagay, "eedaysanaha Hillaac Su'aal," Ma jirin. Waa laga hortegi lahaa inkasta ”.
Dacwada, sarkaalka howlgalka eedeysanaha Sinan Yavuz wuxuu ka marag kacay in Yıldırım uu siiyay ogolaasho sidii inuusan badalin maqas. Yavuz wuxuu yidhi, dim ayaan u diray tareenka sidii ay ahayd. Ma jiro nidaam raadraac kadib dirista. Waxaan halkaas ka shaqeynayay 3.5 sano, celcelis ahaan 60 tareeno ayaa socda. Shantii ilaa tobankii daqiiqaba mar ee M74 xiirane ayaa u baahan in la beddelo Awood uma lihi aniga inaan tago oo aan isla fiiriyo meesha markasta oo aan tago oo aan tareen ku socdo. Cusmaan waxaan ka helay damaanad qaad maqashiirta waxaanan diray tareenka. Ma aqbalayo eedeymaha. Khalad kama lihin shilka. Waxaa la i qabtay 13 bilood. Aniga iyo qoyskayga waxaan u maleynaa inay dhibanayaal yihiin. ”
'Waan kaqaybgalay shaqadeyda'
Maxbuus kale ayaa ku eedeeyey kontoroolka taraafikada Emin Ercan Erbey inuu marag furay. Bey Maalintii ay dhacdadu si caadi ah u bilaabatay. Mar alla markii maqasaska la sameeyay, way ilaalin jireen. Waa la iga daayay. Haddii aan khaladka ugu yar yareeyo, waxaan diyaar u ahay inaan aqbalo ciqaabta oo dhan. ” Iyadoo la raacayo ereyadii Erbey ee isaga u sheegay in loo sheegay in calaamaduhu aysan shaqeynin sababta oo ah shaqada Capital Ray, dhagaystayaashii waxay dhaheen, ca Dhamaan dadkaani ma dhiman doonaan haddii uu jiro calaamad. Xishoodka ”ceeb ayaa timid.
Er ma jiraa guddi khadka toosan ku baaraya dhaq dhaqaaqa ururinta? Er, eedaysanaha Erbey wuxuu ku jawaabay, "Maya, ma jiro guddi noocaas ah ..
Maxkamad ayaa la joojiyay muddo saacad ah.
Ayaa la isku dayaa?
Arinta shilka tareenka ee ka dhacay Ankara, Cusmaan Yildirim, sarkaal tababaran, Sinan Yavuz, sarkaalka mooshinka, iyo Emin Ercan Erbey, oo ah maareeyaha taraafikada, ayaa maxkamad la saarayaa. Magacyada la isku dayo in la xiraa waa sidan soo socota:
Agaasimaha HT YHT Ankara Duran Yaman, Maareeyaha Adeegga Gaadiidka ee Tnal Sayıner, TCDD Amniga iyo Madaxa Maareynta Tayada tayada Erol Tuna Aşkın, Madaxa Waaxda Maareynta Gaadiidka iyo Saldhigga Mükerrem Aydoğdu, Maareeye Kuxigeenka Xarunta Wareegtada ee YakT Kadir Oğuz, Maareeyaha Qeybta Recep Kutlay, Adeegga Gaadiidka Agaasime ku xigeenka Ergun Tuna. Müdür
Magaalada Mersin, waxaa bilaabatay heerka ka gudbida tijaabada shilalka
Ebru Gultekin Iliscari Kiisaska Dib-u-soo-warbixinta Shilalka
Go'aanka kiiska shil tareenka ee xarunta Feneryolu
Xaaladda shil tareen ee Spain ayaa gaartay shirkadda tareenada
Kiiska Shilka ee Ankara YHT ayaa Bilaabmay